Ihowuliseyili neselulosi kaEtherm HPMC for Ukutyabeka / Ikhonkrithi / Grout njenge Water-Ukugcina Agent mveliso kunye nabenzi | Gaoqiang
I-HPMC imfutshane ngeHydroxypropyl Methyl Cellulose, ayinabumba, ayinambitheki, ayinabungozi kumgubo omhlophe. Kwakhona Non-ionic neselulosi kaEtere. Isetyenziswa njengokuqinisela, ukuzinzisa, iarhente yokugcina amanzi, i-emulsifier. Ingasetyenziswa ngokubanzi kumashishini afana nezinto zokwakha, iipeyinti kunye nokwaleka, iiseramikhi, amayeza, ukutya, impahla elukiweyo, imichiza yezolimo. Imveliso yethu ikakhulu isetyenziselwa ishishini lokwakha.
INTO IYUNITHI IMIGAQO YOBUGCISA
I-60 XR YOKUFUNDA 75 XR YOKUFUNDA
UMXHOLO WEHYDROXYPROPYL % 7.0-12.0 I-4.0-12.0
UMXHOLO WENDLELA % 28.0-32.0 19.0-24.0
UMXHOLO WAMANZI % .5 .5
UQINISEKISO LOMlotha % .5 .5
UKUGQIBELA ODLULA 80-100
UKUBONAKALA MPA.S 400-200000
UTSHINTSHO LOKUKHANYA % ≥70 ≥70
UBUMNYAMA % 75 75
UKUPAKISWA KWEZINTO G / L. 370-420
UKHETHO UMBONO WOKUBONAKALA (MPA.S) UKHETHO UMBONO WOKUBONAKALA (MPA.S)
1500 1200-1800 75000 Ngama-50000-85000
10000 9000 ukuya ku-12000 200000 NONE
1. Icandelo lokwakha: Njengearhente yokugcina amanzi kunye nokugcina isamente, yenza udaka lupompeke. Isetyenziswa njengesibopheleli kwityatye, i-gypsum, umgubo we-putty okanye ezinye izinto zokwakha ukuphucula usetyenziso kunye nokwandisa ixesha lokusebenza.Ingasetyenziselwa ukuncamathisela iithayile zeceramic, imarble, umhombiso weplastikhi, uncamathisele ukuqinisa, kunye nokunciphisa inani lesamente. Iipropathi zokugcina i-HPMC zokugcina amanzi zithintela uncamanco ekuqhekekeni kuba loma ngokukhawuleza emva kokufaka, ukomeleza amandla emva kokwenza lukhuni.
2. Umzi mveliso weCeramic: usetyenziswa ngokubanzi njengesibopheleli ekwenziweni kweemveliso zeceramic.
3.Imveliso yokumboza: njenge-thickener, i-dispersant kunye ne-stabilizer kwishishini lokucoca, lihambelana kakuhle emanzini okanye kwi-solvents organic. Njengokususa ipeyinti.
4. Ushishino lwamayeza: izinto zokwaleka; izinto zefilimu; izixhobo zokulawula isantya sokulawula ukulungiselela ukulungiselela ukukhutshwa okuzinzileyo; izinto zokuzinzisa; iiarhente zokunqumamisa; izibophelelo zeethebhulethi; tackifiers
5. Abanye: Le mveliso ikwasetyenziswa ngokubanzi kushishino lokutyabeka kunye nokushicilela i-inki, isikhumba, imveliso yeemveliso zamaphepha, iziqhamo kunye nokulondolozwa kwemifuno kunye nomzi mveliso wempahla eyolukiweyo.
1) Sinamava angaphezu kwe-16 kumzi-mveliso kwaye sikwazi ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu.
2) Sinokunikela ngexabiso elifanelekileyo kunye nokukhuphisana kubathengi bethu.
3) Enye yeefektri ezinkulu emantla e-China, amandla emveliso yonyaka makhulu kwaye athengisela abasasazi kunye neenkampani ezithile zorhwebo
I-4) Kukho iqela elithengisa iinkonzo zetekhnoloji yokunceda abathengi bethu ukuba bafumane ibakala elilinganayo ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
5) Ukuhamba ngokuLungeleleneyo, kufutshane neTianjin Port.
Iphakheji kunye nokuGcina kunye nokuThutha:
1) Ukupakisha okusemgangathweni: Kwiingxowa ezingama-25kg ze-PP ngaphakathi kunye neengxowa ze-PE
2) Iingxowa ezinkulu okanye ezinye iipakethe ezikhethekileyo ngokwemfuno yomthengi.
3) Gcina kwindawo epholileyo neyomileyo, gcina kude kufuma
4) Ubomi beShelf: iinyanga ezili-12
5) Ubungakanani / 20GP: 12Iitoni kunye pallets, 14tons ngaphandle pallets
Ubungakanani / 40GP: 24Iitoni ngeepelethi, iitoni ezingama-28 ngaphandle kweepelethi
Q1. Ngaba uyinkampani yokurhweba okanye uMenzi?
A: Singumvelisi, umzi-mveliso wethu ubekwe eMantla e-China, kufutshane neTianjin Port. Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu.
Umbuzo Sinokuqinisekisa njani ukuba uMgangatho weMveliso?
A: Zonke izinto kufuneka kuvavanywe kubhekisa kwiinkcukacha eziphambili ngaphambi kokukothula.
I-Q3: Ngaba iisampulu zisimahla?
A: Sinikezela ngesampulu yasimahla, umthengi ahlawule iindleko zokuhanjiswa.
Q4: Athini amagama akho okuhlawula?
A: T / T i-30% kwangaphambili kunye nemali eseleyo ngaphambi kokukholelwa.
Umbuzo 5. Ngaba kulungile ukuprinta ilogo yethu ezingxoweni?
A: Ewe. singakwazi, nceda usinike uyilo oluqinisekisiweyo ngaphambi kwemveliso.
Egqithileyo I-GQ-SN yokudibanisa ukuLungelelanisa ukuTyibilika-Ulwelo (alkali-simahla)
Okulandelayo: Isodium Gluconate
I-GQ-SN yokudibanisa ukuLungelelanisa ukuTshintsha-Ulwelo (A ...